Fanamafisana DC Supercharged
Supercharged DC cool fan Ity manaraka ity dia fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny mpankafy booster sy ireo mpankafy fampangatsiahana mahazatra ataon'ny t ...
Fanazavana amin'ny antsipiriany ny asan'ny mpankafy DC
1. Auto Restart Rehefa voahidy ny mpankafy dia tapaka ho azy ny onjam-piasan'ny mpankafy, ary hiasa amin'ny toetr'andro ambany ny mpankafy, mba hiarovana ny mpankafy tsy hirehitra noho ny onja mahery; asa iray hafa an'ny Auto Restart: ny mpankafy dia mamoaka famantarana isaky ny mandeha ...
Ahoana ny fomba hitsarana izay fomba famatsiana rivotra hampiasana ny heat sink?
Ahoana no hamaritana ny fomba famatsian-drivotra ampiasain'ny fidinan'ny hafanana? Ny mpankafy mikoriana axial dia mpankafy iray izay manosika ny fikorianan'ny rivotra amin'ny lalana mitovy amin'ilay hazo rehefa mandeha ny lelany. Ny vombony mangatsiaka dia sokajiana arakaraka ny làlan'ny axis-drivotra sy ny lalan'ny setroka. Ny fampangatsiahana ...
Marihina fa tsy miresaka momba ny mpankafy indostrialy momba ny vokatra vita (toy ny fitaovana fampangatsiahana sy rivotra ho an'ny toerana avo toa ny zavamaniry indostrialy, fitehirizana lozisialy, efitrano fiandrasana, efitrano fampiratiana, kianja, fivarotana lehibe, lalambe, tonelina, ...
EC mpankafy dia vokatra vaovao amin'ny indostrian'ny mpankafy. Tsy mitovy amin'ny mpankafy DC hafa io. Tsy vitan'ny hoe mampiasa herinaratra angovo DC fotsiny, fa koa famatsiana herinaratra AC. TOSIKARATRA avy amin'ny DC 12v, 24v, 48v, mankany AC 110V, 380V dia mety ho universal, tsy mila manampy fiovam-po inverter. Motera rehetra misy zero anatiny c ...
1. Fitsipika miasa: Ny fitsipiky ny fiasan'ny mpankafy DC: amin'ny alàlan'ny alàlan'ny herinaratra DC sy ny fampidirana electromagnetic, ny angovo herinaratra dia navadika ho masinina handroahana ny fihodinan'ny lelany. Ny coil sy ny IC dia avadika tsy tapaka, ary ny peratra magnetika fampidirana dia mitondra ny fihodinan'ny ...
Metal Grill Fan 80mm Guard, Fanala mangatsiaka Axial, 3007 Dc Cooling Fan, 30mm Dc Axial Fan, Hvac Fan Puller, Mpiambina Fanina plastika,